» चितवनमा महाधिवेशन गरेर एमालेले मलाई जिताउन सुरु गर्‍यो : प्रचण्ड
चितवनमा महाधिवेशन गरेर एमालेले मलाई जिताउन सुरु गर्‍यो : प्रचण्ड
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार १७:१७ प्रकाशित
चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले चितवनमा १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने नेकपा एमालेको निर्णयले आफ्नो बिजयी यात्रा सुरु भएको बताएका छन् ।
आज (मंगलबार) भरतपुर बिमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गरेर आफुलाई बिजयी गराउन सुरुवात गरेको बताएका हुन् । एमालेले प्रचण्डलाई कति धेरै महत्व दिँदो रहेछ भनेर पनि चितवनका जनता प्रष्ट भएको उनको भनाई थियो ।
“उहाँहरुले यहाँ महाधिवेशन गरेर मलाई बिजयी बनाउने सुरुवात गर्नु भयो भन्ने लागेको छ । एमालेले मलाई कति धेरै महत्त्व दिँदो रहेछ भनेर चितवनका जनताले त राम्रै बुझ्नि भए नि, उनले भने, प्रचण्डको भूमिका के रहेछ देशको राजनीतिमा ? महत्त्व के रहेछ भनेर ?
उनले एमालेले बुटवलमा गर्ने भनेको महाधिवेशन चितवनमा गर्नु आफ्ना लागि खुशी कै कुरा भएको समेत बताए । “एमालेले बुटवलमा गर्ने भनेको महाधिवेशन अन्तिम समयमा प्रचण्डकै जिल्लामा, क्षेत्रमा जानु पर्छ भनेर निर्णय गर्नु हाम्रा लागि खुशी कै कुरा हो, उनले भने, प्रचण्डमाथि केन्द्रित गरेर महाधिवेशन गर्नु आँफैमा फाइदाजनक छ ।”
फरक प्रसँगमा उनले धुलिखेलमा जिपलाइन चढेको बिषय आवश्यक भन्दा बढी चर्चा भएको बताएका छन् । त्यसलाई सामान्य परिघटनाको रुपमा मात्र लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । “म एक रातका लागि सुकुटे गएको थिए । फर्किदा त्यहाँ चढ्न रमाईलै हुन्छ भनेर तुरुन्तै निर्णय गरेर म चढे । त्यसलाई एउटा सामान्य परिघटनाको रुपमा लिँदा पनि हुन्छ, उनले भने, मेरो अलिकती जोखिमपूर्ण क्रियाकलाप गर्ने रुचीलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरेर पनि हुन्छ । यो यत्रो धेरै चर्चा हुनुपर्ने बिषय नै थिएन ।”